12 Arrimood oo Saameeya Istaraatiijiyadda Emailkaaga Caalamiga ah | Martech Zone
12 Arrimood oo Saameeya Istaraatiijiyadda Emailkaaga Caalamiga ah
Tuesday, April 12, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waxaan ka caawinay macaamiisha caalami (I18N) iyo, si fudud loo dhigo, maahan wax xiiso leh. Nuujinta Dejinta, tarjumaadda, iyo dejinta ka dhig geedi socod adag.
Haddii qalad lagu sameeyay, waxay noqon kartaa wax laga xishoodo… oo aan lagu xusin waxtar la'aan. Laakiin 70% dadka isticmaala khadka tooska ah ee adduunka ee isticmaala 2.3 bilyan ma ahan kuwa ku hadla af Ingiriisiga hooyo waxaana $ 1 kasta oo lagu kharash gareeyo maxalliga ah la ogaaday inay hayaan ROI oo ah $ 25, marka dhiirrigelinta ayaa jirta inay meheraddaadu si caalami ah u socoto haddii ay suurogal tahay.
Email-yada 'Monks' ayaa isku soo duubay faahfaahinta adduunka oo dhan ula socda suuqgeynta emailkaaga istiraatiijiyad bixinaysa 12 qodob oo saameyn ku leh guusha suuqgeynta emaylkaaga.
Tixgelinnada Luqadda iyo Nuqul - samee cilmi-baaristaada luuqadaha badan si aad uga fogaato ereyada saameyn ku yeelan kara gudbinta.
Xulista Tarjumayaasha - kuma filna in la fahmo sida loo turjumo, ilahaaga tarjumaadda waa inay sidoo kale fahmaan waxa ku jira.
Email Qurxinta - nashqadda e-maylkaagu waa inay dhaqan ahaan u aqbali karaan dhagaystayaasha aad bartilmaameedsanayso.
Maareynta Habka - laga bilaabo naqshadeynta iyo tarjumaadda illaa warbixinta, waa inaad si fudud u cabbiri kartaa saameynta dadaalkaaga gobol ahaan.
Qaabaynta farriinta iyo qaabeynta - RTL (Xuquuqda Bidix) ama luqadaha xaq u yeelashada dhexe waxay u baahan karaan qaabab iswaafajin koox kasta leh.
Istaraatijiyadda Koowaad ee Wareegta - haddii aad caalami tahay, waxaad u badan tahay inaad tahay qof guurguura! Waxaad si fiican kuugu fiicnaan lahayd daaqadaha yar yar iyo garoomada daawashada.
Qaab dhismeedka Sharciga ah - hubso inaad tahay waafaqsan shuruucda waddan kasta si loo hubiyo inaadan ku xadgudbin wax sharci ah waxaadna sare u qaadi kartaa gaarsiinta bixiyeyaasha adeegga internetka ee maxalliga ah.
waxkabadalka - wax ka qabashada emaylka caalamiga ah waxay si bayaan ah u ballaarineysaa noocyada shakhsiyeed ee aad sameyn karto si aad u kordhiso furitaanka, qasabadaha iyo beddelaadyada.
Baaq-ficil - Ha dhaafin sheegashadaada intaad isku dayeyso inaad macaamiisha riixdo, wadamada qaar waxay leeyihiin sharciyo adag oo adag oo ku saabsan xayeysiinta iyo dhiirrigelinta.
waqtiga - Xilliyeed, ciidaha goballada, iyo jadwalka shaqada dhammaantood waxay saameyn ku yeelan karaan qiimahaaga furan iyo guji-ilaa.
Maareynta Xogta iyo Liiska - Liisaskaagu ha ahaadaan kuwo firfircoon oo cusub, hubinta kala-soocidda iyo kala-shaandhaynta karti-goboleedku waa mid faahfaahsan
Cayayaanka - waxay u taagan tahay siyaasad, dhaqaale, bulsho, teknolojiyad, sharci iyo deegaan. Noqo mid u nugul saameynta deegaankaaga ee fariintaada midkastoo aragtiyadan ah.
Waa kuwan faahfaahinta oo dhan, hubi kan nooc is-dhexgal ah oo ka socda Email Monks.
Tags: lahjadcinwaanka emaylkainfographic emailemail caalami ahemail caalami ahcinwaanka emaylkacinwaanka emaylkaemail suufiyadoodiiemail suufiyada infographictarjumaadda emaylkaDejitarjumaadda aadanahaturjumaadda mashiinkacayayaanbidix bidixJoeQaabdhismeedka spamtarjumaadawaa maxay cayayaanku
20 Siyaabood oo Aad Ku Heli Karto Qiimeynta Mawduucaaga Ayaa Ka Fiican Tartamiyahaaga